Lamjung Khabar | भदौ १ देखि एयरलाइन्स खोल्ने त भनियो, खै स्पष्टता ?
आइतबार, कार्तिक ७, २०७८ / Oct 24, 2021
के हो मिनरल्स ? किन शरीरलाई आवश्यक छ ?
यूएईमा रोजगारी गुमेपछि नेपाली श्रमीक समस्यामा, दूतावास जाँदा भेटिन्नन् राजदूत
चिरिच्याट्ट पहिरन-शैलीको १० काइदा
ट्रेकिङ गर्न आएका विदेशी पर्यटकको उद्दार, भरिया भने अलपत्र
गर्मीमा दही खानुहोस्, यी चार खानेकुरासँग नमिलाउनुहोस्
रेडमी नोट ९ सिरिज नेपाली बजारमा, मूल्य कति ?
पर्सामा थप ४५ जनामा कोरोना संक्रमण, भोलिदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा
भटाभट म्युजिक भिडियोको छायांकन, फिल्मको कहिले ?
भदौ १ देखि एयरलाइन्स खोल्ने त भनियो, खै स्पष्टता ?
By Lamjung Khabar २०७७ साउन २१ गते बुधबार ०१:०८ AM
१९ साउन, काठमाडौं । आगामी भदौ १ देखि हवाई उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरेको सरकारले साउन १५ बाटै पर्यटन क्षेत्र खुला भएको घोषणा गरेको छ । धेरैको आशाको छ, भदौ १ देखि विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउनेछन् र होटलमा बास बस्न थाल्नेछन् ।
साउन १५ यता कतिपय तारे होटेलहरु खुलेका छन् भने केही खुल्ने तर्खरमा छन् । पर्यटकीय कार्यालयहरु बुकिङ लिने तयारीमा छन् । तर, सरकारले सोचेजस्तै भदौ १ देखि नै विदेशी पर्यटकहरु नेपाल घुम्न आउलान् त ? कोरोना महामारीको वीचमा उनीहरुको बसाइ र घुमाइलाई कसरी व्यवस्थित गरिएला ? कोरोनाको जोखिमबाट पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउने सरकारको तयारी के छ ?
यी प्रश्न सञ्चार माध्यम वा आम नागरिकका मनमा मात्रै उब्जिएका होइनन्, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम गर्ने मुख्य निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनन्जय रेग्मीका मनमा पनि यस्तै प्रश्न उब्जिएका रहेछन् ।
पर्यटक आगमनको तयारी कस्तो भइरहेको छ भनेर बुझ्न खोज्दा सीईओ रेग्मीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘मलाई पनि एउटा अचम्म के लाग्छ भने १ भदौबाट एयरलाइन्स खोल्ने त भनियो । तर, भिसाको प्रक्रिया के हो त ? यो विषय अहिले पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । अर्कोतर्फ भिसा दिने न्यूनतम आधार के हो ? पर्यटकले विदेशमै गरेको पीसीआर नेपालमा मान्य हुने हो कि ? विमानस्थलमा आएर छुट्टै रिपोर्ट लिनुपर्ने हो कि ? कुन-कुन गन्तव्यबाट पर्यटक आउन पाउने हो ?’
सीईओ रेग्मीले थपे, ‘नेपालमा आएर क्वारेन्टिनमा राखिने हो कि ? राख्ने भए कति दिन राख्ने हो ? खै स्पष्टता ?’
हवाई उडान खुला भएसँगै नेपालमा पर्यटकहरुको आगमन शुरु हुने सरकार र पर्यटन व्यवसायीहरुको अपेक्षा छ । तथापि, भदौ १ देखि नै हवाइ उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरिए पनि सरकारले शरद ऋतुलाई लक्षित गरी पर्यटक आउने अपेक्षासहित पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
पर्यटन बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएको केही दिनमै कोरोना भाइरसको महामारी शुरु भएपछि डा. रेग्मीले औपचारिकरुपमा आफ्नो चारवर्षे योजना सार्वजनिक गर्न पाएका थिएनन् । यहीबीचमा उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेका छन् ।
अब १ भदौदेखि हवाईजहाज चल्न थाल्यो भने पर्यटकहरुको सेवा-सत्कार कसरी हुनेछ ? पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? कोरोना पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन बाँकी रहेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रका आगामी दिन कस्ता हुनेछन् ? यिनै जिज्ञासामा केन्दि्रत रहेर अनलाइनखबरकर्मी अच्युत पुरीले सीईओ रेग्मीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अब भदौ १ पछि के हुन्छ ? त्यस दिनदेखि विदेशी पर्यटक आउँछन् भनेर सरकारले साउन १५ बाट ठूला होटलहरु खोल्न दिएको हो ?
सरकारले १ भदौमा हवाई यातायात खोल्ने भन्यो । तर, त्यसको १५ दिन अगाडि नै होटेल र पर्यटन खोल्ने निर्णय भयो । यसको मतलव, यो १५ दिन सेवा प्रदायक सबैले पर्यटकलाई सुरक्षित सेवा दिन तालिम वा अभ्यास गर्न सकुन् । तपाईले देख्नुभयो, १५ साउनमै होटेल त खुलेनन् । किनकि होटेलमा पाहुना छैनन् । तर, विस्तारै होटेलले जब विजनेश हुने अवस्था देख्छन्, उनीहरु होटेल खोल्छन् ।
पाहुना आउनु अगाडि नै कर्मचारीको अभ्यास र तालिमका लागि तयारी गर्दै गर्नुस् है भनेरै अगाडि नै होटेल र पर्यटकीय कार्यालय खोल्न भनिएको हो । भोलि परिस्थिति फेरियो भने नयाँ निर्देशन जारी हुन पनि सक्छ । किनकि, यो हाम्रो हातको विषय रहेन ।
अहिलेको समय बिजनेशभन्दा पनि सन्देश दिने मात्रै हो कि ? अहिलेको अवस्थामा पर्यटकहरु घुम्ने नेपालको उपयुक्त गन्तव्य कुन हो ?
नेपालमा अंकमाल होइन, नमस्कार अभिवादन छ । सबै मानिसले मास्क लगाएका छन् । एकले अर्कोलाई छुनुपर्दैन । एकजना पाहुना बसेको कोठामा ४८ घण्टा अर्को पाहुना बस्दैन । घुमघाम पनि शहर र भीडभाडमा होइन, खुला पहाड र हिमाली भेग वा जंगलमा हुने छ ।
सबैले सामाजिक दूरी कायम गरेका छन् । यो सन्देश अब हामीले प्रवाह गर्न खोज्दैछौं । ता कि पर्यटकलाई लागोस्, नेपाल महामारीका बीचमा पनि उच्च सतर्कता अपनाएर खुला भएको पर्यटकीय गन्तव्य होस ।
नेपालमा घुम्दा हामीलाई त जोखिम हुने छैन नै, हाम्रो कारणले पनि नेपाललाई जोखिम नहोस भनेर पर्यटक आफैं सचेत बन्नेछन् । यसको मतलव के होइन भने पर्यटन खुला भयो, झन कोरोना आउने भयो । त्यस्तो हुँदैन ।
तर, एयरलाइन्सको सन्दर्भमा अझै अन्योल छ नि त ?
मलाई पनि एउटा अचम्म के लाग्छ भने १ भदौबाट एयरलाइन्स खोल्ने त भनियो । तर, भिसाको प्रक्रिया के हो त ? भिसा सम्बन्धित मुलुकमै पुगेर दूतावासबाट लिनु पर्ने हो कि ? अनलाइन भिसा लिनुपर्ने हो कि ? विमानस्थलमा आएर लिए पनि पुग्ने हो कि ? यो विषय अहिले पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छैन ।
अर्कोतर्फ भिसा दिने न्यूनतम आधार के हो ? पर्यटकले विदेशमै गरेको पीसीआर नेपालमा मान्य हुने हो कि ? विमानस्थलमा आएर छुट्टै रिपोर्ट लिनुपर्ने हो कि ? कुन-कुन गन्तव्यबाट पर्यटक आउन पाउने हो ? नेपालमा आएर क्वारेन्टिनमा राखिने हो कि ? राख्ने भए कति दिन राख्ने हो ? खै स्पष्टता ?
अब १० दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा हवाई यात्रुले के आधारमा टिकट काट्छन् ? यो विषय केवल पर्यटनको मात्र होइन, स्वास्थ्यको पनि हो । हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै आउने निर्देशिकाको पर्खाइमा छौं ।
यसका लागि बोर्डको प्रस्ताव के हो ?
हामी अब अगाडि त बढ्नु नै छ । किनकि, सधंैभर घरभित्र थुनिएर समस्या समाधान नहुने रहेछ, यो त हाम्रै भोगाइले स्पष्ट भइसक्यो । तर, सतकर्ता प्रमुख विषय हो ।
अब कुनै पनि व्यक्ति विदेशबाट नेपाल आएपछि १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र घुमघाममा निस्कने परिपाटी व्यवहारिक हुँदैन । बरु यसको साटो हरेक व्यक्तिको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्टका आधारमा मात्र सम्बन्धित मुलुकबाट जहाज चढ्न पाउने र उनीहरुको नेपालमा समेत अनिवार्य पीसीआर गरिने भन्ने विकल्प हुन सक्छ । बरु यसको मूल्य पर्यटकसँगै लिइनेसम्म प्रावधान राख्न सकिन्छ । किनकि, तिर्न सक्ने मानिस घुमघाममा आउँछ ।
तर, यसमा हाम्रो प्रस्तावको कुनै अर्थ छैन ।
हामी -बोर्ड) ले गरेको प्रस्तावमा पर्यटन मन्त्रालयले मात्र निर्णय लिन सक्दैन । यो सीसीएमसीमा जान्छ । त्यो कमिटीले समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमतिविना कुनै निर्णय लिन सक्दैन । यस्ता विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्‍यो ।
अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय लिँदा पनि केही व्यवहारिक भएर लिनुपर्‍यो । स्वास्थ्यकै कारण अर्थतन्त्रका हरेक अवयव ठप्प पार्ने नभई अधिकतम सचेत भएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने गरी निर्णय हुनुपर्‍यो ।
अझ हाम्रो प्रस्ताव त कतिसम्म छ भने सरकारले अनुमति देओस, पर्यटकको विमानस्थलमै पीसीआर परीक्षणको जिम्मा निजी क्षेत्रले लिन्छ । तपाई प्रोटोकल हामीलाई दिनुहोस, मूल्य पनि तोकिदिनुहोस् । हामी त्यसलाई पछ्याउँदै निजी क्षेत्रमार्फत परीक्षण गराउँछौं, ताकि सरकारको नियमित परीक्षण र काममा पर्यटकका कारण बाधा नपरोस् ।
तर, हामी के चाहँदैनौं भने अब पनि विमानस्थलमा आर्मी शासनको झल्को होस् । अब पर्यटक आउन थालेपछि विमानस्थलमा आर्मी ड्रेसका कर्मचारीले पर्यटकलाई निर्देशन दिनु अस्वाभाविक हुन्छ । अब पर्यटकको सेवामा दक्षता भएका साधारण राष्ट्रिय नेपाली पोशाक लगाएका कर्मचारी वा स्वयमसेवकबाट यात्रुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, ता कि पर्यटकले म यो देशमा किन आएँछु भन्ने नसोचोस् । कुनै पनि प्रकारको डरको अनुभूति उसमा नहोस् ।
सूचना- प्रविधि १ all.year अगाडि
माइक्रोसफ्टले ल्यायो एकै पटक १ हजार जनासँग कुरा गर्न सकिने एप्स
विदेश १ all.year अगाडि
संयुक्त अरब एमिरेट्सको मङ्गल ग्रह जाने पहिलो ऐतिहासिक यानको सफल प्रक्षेपण
मोटरसाइकल बीमाशुल्कमा नेको इन्स्योरेन्सको मनपरी, साढे ६ हजारमा हुने बीमा गर्न १५ हजार !
लकडाउनको असर : सिजनमै ‘ब्राण्डलेस’ पहिरन बजार
वास्तु अनुसार भाग्य चम्काउने ७ उपाय
हुम्ला चिनाउने रोकाया दाइ
कामपा–११, बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल
महाप्रवन्धक- बिमल गुरुङ
कार्यकारी सम्पादक- कर्णराज पाण्डे
© 2021 Lamjung Khabar | Website by Prosiddhi Tech